Before getting SME Loans — Balance Professional Services
Before getting SME Loans
အသေးစား နှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်း (SME) တွေ ဘဏ်ချေးငွေ မယူခင်
သင်ဟာ SME လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ပုံမှန် Bank Loan ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ JICA (Japan International Cooperation Agency) က မြန်မာနိုင်ငံ SME လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက် ချပေ:ထားတဲ့ SME Loan ပဲဖြစ်ဖြစ် ယူဖို့တွေးနေပြီလား? ဒါဆိုရင် လုပ်ငန်းရှင်အများစု ကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့ ပြဿနာလေးတွေ ရင်ဆိုင်နေရပြီလို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။
အဲ့ပြဿနာလေးတွေက ဘာတွေလဲ၊ ဘယ်လိုမျိုး ဖြေရှင်းရင်အဆင်ပြေသွားနိုင်မလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ကြရအောင်
ပြဿနာ (၁) - Insufficient Working Capital (လုပ်ငန်းလည်ပတ်ငွေ အရင်းအနှီး မလုံလောက်ခြင်း)
လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေတဲ့အချိန်မှာ ငွေမလုံမလောက်ဖြစ်တာ၊ ငွေပြတ်လတ်တာကြုံရတာလောက် ခေါင်းကိုက်ရတာ၊ သွေးတိုးရတာ မရှိပါဘူး။ အဲ့လိုအချိန်မှာ Bank Loan တွေယူချင်တာ၊ ချေးချင်တာလည်း မထူးဆန်းပါဘူး။
ဒါပေမယ့် အကြံပေးချင်တာက အဲလိုအဖြစ်မျိုးတွေ ကြုံတွေ့လာရတဲ့အခါမှာ အလောတကြီး ဆုံးဖြတ်ချက်မချလိုက်ပဲ ကိုယ့်လုပ်ငန်းကို ဘာလို့ငွေမလုံလောက်လဲ၊ ငွေပြတ်လပ်သွားလဲ ဆိုတာပြန်လည် စီစစ်သင့်ပါတယ်။
• ကိုယ့်ရဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ပုံတွေမှားနေလား ?
• ကိုယ့်ရဲ့ Product ၊ ဝန်ဆောင်မှုတွေ အတွက်ငွေကြေး ထိုက်သင့်သလောက်ယူရဲ့လား/ ရရဲ့လား ?
• ဝန်ထမ်းတွေ၊ လူယုံတွေက ကိုယ့်ဆီကအလွဲသုံးစားလုပ်နေလား ?
• အိမ်ငှားခများ၊ ကုန်ကြမ်းပေးသွင်းသူများ၊ ဝန်ထမ်းများကို ပေးရတဲ့ ပိုက်ဆံတွေများနေလား ?
• ကြော်ငြာတွေအတွက် မလိုအပ်ပဲ ပိုက်ဆံတွေပိုသုံးမိနေလား?
အဲလိုပြဿနာတွေရဲ့ မူလဇစ်မြစ်ကို အရင်လိုက်ရှာကြည့်သင့်ပါတယ်။ ပြဿနာတွေရဲ့ အကြောင်းအရင်းကိုသိလာတာနဲ့ ဖြေရှင်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေ တွေ့လာနိုင်မှာပါ။
ပြဿနာ (၂) - လုပ်ငန်းချဲ့ထွင်ခြင်း
စီးပွားရေးအဆင်ပြေလို့ လုပ်ငန်းချဲ့ထွင်ချင်တယ်ဆိုတာ ကြားလို့ကောင်းသလောက် ငွေကုန်ကြေးကျများလှပါတယ်။ လုပ်ငန်းချဲ့ထွင်တဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်လက်ထဲမှာရှိတဲ့ ငွေပမာဏထက် ပိုပြီး ငွေကုန်ကြေးကျများလာတဲ့အခါ Bank Loan ယူလိုက်တာက ကောင်းတဲ့ ရွေးချယ်မှုတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Bank ကိုသွားပြီး Loan မယူခင် ရလာတဲ့ချေးငွေတွေကို လုပ်ငန်းရဲ့ ဘယ်နေရာတွေမှာသုံးမယ်၊ ဘယ်လိုအသုံးပြုမယ်ဆိုတဲ့ Plan ဆွဲထားသင့်ပါတယ်။ ပြီးရင် Bank Loan တွေကိုဘယ်လိုပြန်ဆပ်မယ်၊ ဘယ်ေလာက်အချိန်အတွင်း ပြန်ဆပ်မယ်ဆိုတာကိုလည်း သေသေချာချာ Plan ချထားသင့်ပါတယ်။ ချေးငွေယူလိုက်တာနှင့်အမျှ ပါလာတဲ့ Risk တွေကိုလည်း ကြိုတင်တွက်ဆထားပြီး ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသင့်ပါတယ်။
ပြဿနာ (၃) - လုပ်ငန်းတူ Business Partner ကိုအမ်းထုတ်ခြင်း
ကိုယ်နဲ့ အတူတူလုပ်နေတဲ့ Business Partner နဲ့အဆင်မပြေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်/ ကိုယ့်ဟာကိုယ် တစ်ကိုယ်တည်း ဆက်သွားချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် သူ့ရှယ်ယာတွေကိုကိုယ်ကဝယ်ပြီး သူ့ကိုထုတ်မလား၊ သူ့ကိုကိုယ့်ရဲ့ ရှယ်ယာတွေ ရောင်းပြီး ကိုယ်ကထွက်မလားဆိုတဲ့ ဖြေရှင်းချက်တွေ ရှိပါတယ်။ ကိုယ်ကအလုပ်ကို တွယ်တာပြီး ကိုယ့်ရဲ့ Business Partner ရဲ့ Share တွေဝယ်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားရင် အောက်ပါမေးခွန်းတွေကို ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်မေးကြည့်သင့်ပါတယ်။
• ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ငန်းက တကယ်ဘယ်လောက်တန်သလဲ?
• ဒီလုပ်ငန်းကို အစကပြန်စလုပ်ရင် Business Partner ရဲ့ Share တွေဝယ်ဖို့ သုံးလိုက်ရတဲ့ငွေထက် ပိုကုန်မလား/ မကုန်ဘူးလား?
• ကိုယ်ဝယ်လိုက်တာ ဘာတွေလဲ တိတိကျကျရော သိရဲ့လား?
• ကိုယ့်ဆီကနေ ခွဲထွက်သွားရင် သူကလုပ်ငန်းတူ ပြိုင်ဘက်တစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်သလား၊ ကိုယ့်ဆီက ဝန်ထမ်းတွေ/ Customer တွေ သူ့နောက်ပါသွားနိုင်သလား?
• Bank Loan တွေမယူခင် နောက်ထပ်ဖြေရှင်းစရာ နည်းလမ်းတွေရှိသေးသလား? ရွေးချယ်စရာရှိသေးသလား?
ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ငွေသုံးလိုက်ပြီးရင် နောက်ဆုတ်လို့ မရတော့ပါဘူး။ အဲဒီတော့ ပြန်ပြင်လို့မရတဲ့ အရာတွေ၊ သွေးတိုးစရာတွေ၊ ခေါင်းခဲစရာ အဖြစ်မျိုးတွေ မကြုံရအောင် ဘာမှမလုပ်ခင် သေချာစဉ်းစားသုံးသပ်ပါ။ တက်ကျွမ်း နားလည်တဲ့သူတွေနဲ့ တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
ရဲရင့် (Client Success)
SMEHtet Khaing Hla Soe October 10, 2018 SME
How to find perfect business partner?
SME, Business AdviceHtet Khaing Hla Soe October 10, 2018 Business Advice, SME